भगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पाल्न सक्ने हिम्मत राख्छ – Khabar Silo
छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?तर हाम्रो समाज छोरीलाई अझैपनी हेला अनि तिरस्कार गर्ने गरिन्छ ।
छोरी बिनाको कुनै अस्तित्व हुदैन : जस्तै चाडबाड पनि छोरी नभए शुन्य प्राय हुन्छ । पुरातनवादी सोच अनि पुरुष प्रधान देश भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कि कहिलेबाट चै छोरा-छोरी बिच समान ब्यवहार गरिन्छ?
छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?
भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?कुनैपनी घरमा शान्ति सुन्दर अनि संस्कारिक हुन अवश्य पनि छोरीको आवश्यकता पर्दछ । छोरी बिनाको कुनै अस्तित्व हुदैन : जस्तै चाडबाड पनि छोरी नभए शुन्य प्राय हुन्छ ।
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी र जिपी तिमल्सिनाको वैवाहिक सम्बन्ध संकटमा परेको छ।एक समय अन्तर्जातिय विवाह गर्ने रोल मोडल बनेका यी दुबैको घर झगडा बढ्दै जाँदा आ आफ्नो बाटो लाग्ने तयारीमा लागेका खबर आजको शुक्रबारले छापेको छ।दुई सन्तानका अभिभावक रहेका उनीहरुबीच सहमति गराउने अन्तिम प्रयास भइरहे पनि सम्भावना भने कम रहेको स्रोतको दाबी छ। अहिले […]
१० कात्तिक, काठमाडौं । आज यमपञ्चकको तेस्रो दिन अर्थात, कुकुर तिहार । कुकुरको पूजा तथा मीठामीठा खानेकुरा खान दिई मनाइँदैछ । कुकुर तिहार यमपञ्चक अर्थात् दीपावली पर्वको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन पर्न गएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरलाई मीठामीठा परिकार […]
काठमाडौं । आज दशैँको पाँचौ दिन स्कन्दमाता भगवतीको पूजाआजा गरी मनाईँदै छ। भगवान स्कन्दकुमार कार्तिकेयको बालस्वरुपलाई सदैव काखमा राखी ममतामयी स्नेह प्रदान गर्ने हुनाले नवरात्रीको पाँचौ दिन यिनलाई स्कन्दमाताको नामबाट पुकार्ने गरिन्छ। चार हात मध्ये दायाँतर्फको माथिल्लो हातले स्कन्दकुमार कार्तिकेयलाई काखमा च्याप्दै बायाँतर्फको तल्लो हातमा कमलको फूल र माथिल्लो हातले बरमुद्रा धारण गर्ने यिनी पद्मासन […]